Qarax Sarkaal lagu dhaawacay oo ka dhacay Muqdisho - Awdinle Online
Qarax Sarkaal lagu dhaawacay oo ka dhacay Muqdisho
Qarax nooca miinada dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa uu dhowr daqiiqo kahor uu ka dhacay wadada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafaddo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir.
Goobjoogayaal la hadlay Warbaahinta ayaa ku sheegay in qaraxaas lala eegtay gaari uu watay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Milateriga dowladda Federaalka, xili uu mararay wadada Afisyooni ee Muqdisho.
Warar hordhac ah oo la helayo ayaa sheegaya in Sarkaalka lala eegtay qaraxaas lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan uu dhaawac soo gaaray iyo Askar la socotay, kuwaasi oo xarun Caafimaad loola cararay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka oo tegay goobta ayaa xiray aaga oo dhan, isla markaana dadka iyo gaadiidka u diidaya inay maraan wadada, sidoo kalena wada baaritaano kala duwan.
Ilaa iyo hadda laamaha amniga dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan ka hadli qaraxaas Caawa ka dhacay wadada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho ee lala eegtay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Milateriga dowladda.
Previous articleWasiir Caafimaad oo isku casilay Bukaano u geeriyooday Ogsijiin la’aan
Next articleFarmaajo oo ka hadlay geerida Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga